Madaxwayne Farmaajo oo u Guuraya Afgooye, Akhriso Sababta. – Hornafrik Media Network
Madaxwayne Farmaajo oo u Guuraya Afgooye, Akhriso Sababta.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa maalinta Sabtida ee soo socota isugu yeeray Labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya, si Madaxweynuhu khudbad ka hadleysa xaalada dalka ugu jeediyo, kaddib Qaraxii ugu weynaa abid ee dalka ka dhaca oo ay ku dhinteen in ka badan 300 oo ruux.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Kheyre ayaa sheegay in Madaxweynaha uu isugu yeeray labada Aqal ee Baarlamaanka, si uu dalka ugu hoggaamiyo xaalad dagaal oo dalka geli doono wixii ka dambeeya maalinta Sabtida ah.
HornAfrik waxay ogaatay in Madaxwaynuhu marka uu iclaamiyo Dagaalka ka dhanka ah Alshabaab inuu u guuri dooni Degmadda Afgooye ee Gobalka Shabeelaha Hoose, halkaas oo uu ka hogaamin doono Dagaalka ka dhanka ah Kooxda Alshabaab. Waxaana Madaxwaynuhu uu si KMG ah ugu sii shaqayn doonaa Beerta Sh Zaahid ee Degmadda Afgooye, iyadoo haatanba dhaq dhaqaaq Ciidan laga dareemayo Afgooye, taasoo ah ifafaale muujinaysa in Madaxwaynuhu halkaasi u guuri doono.
Taliyayaasha Ciidamadda Qalabka Sidda iyo Wasiiradda qaar ayaa ku wehlin doona Madaxwaynaha joogitaankiisa Afgooye, Waxaana sidoo kale la filayaa in Madaxwaynaha Koonfur Galbeed, Shariif Xasan Sh Aadan uu isna soo gaaro Afgooye, inkastoo wararka qaar ay sheegayaan inaan lagu wargalin socdaalka Madaxwayne Farmaajo ee Afgooye, balse uu si iskiis ah u tagi doono, Maadaama uu helay xogta ah in Farmaajo halkaasi ku wajahan yahay.
14-kii October ayaa waxaa ka dhacay Isgoyska Soobe Qarax aan abid noociisa ka dhicin Somalia, kaasoo daqiiqado gudahood ku galaaftay in ka badan 300 Muwaadiniin Soomaali ah, tiro intaas ka badana ay ku dhaawacmeen. Waxaana qaraxaasi uu carro wayn ku abuuray Dadka Soomaaliyeed, iyadoona Masuuliyadda Qaraxaasi lagu eedeeyay Kooxda Alshabaab.
Dhageyso:-Gudoomiye Thaabit”Taalo Lagu Xasuusto Xasuuqii Dhacay Ayaan Dhiseynaa”